UFulfillPanda yinkampani yabucala yokuwisa inkampani egxile ekunikezeleni ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu zokurhoxa kweelebheli. Abasebenzi bethu abanolwazi banokukunceda ekufumaneni ngokungathandabuzekiyo kunye nokulebhelisha izinto ezilahlayo. Unokonyusa intengiso yotyalo-mali kunye nembuyekezo ngokuthengisa ezi mveliso zinomda ophantsi kwegama lakho.
Yintoni ukuShiyeka kweelebheli labucala?
Ukurhoxiswa kwelebheli yabucala yinkqubo apho umvelisi enza imveliso yomthengisi eya kuthengiswa kuphela phantsi kwegama lomthengisi. Izinto ezinjalo ziya kupakishwa ngumenzi wegama lakho lokuwisa. Ngenxa yoko, zonke iimpahla ezithengwe yiabathengi ngokuyeka kwakho okanye ishishini le-ecommerceiya kubhalwa njengeyakho. Ukwehliswa kwelebheli yabucala kunakho ukuphucula intengiso kunye nengeniso ngohlobo oluthile lwentengiso.
Ukugcwalisa iPanda kuya kukunceda ufumane izinto zakho ezinqwenelekayo kwaye uzibhale ngasese. Iza kuyandisa ukuthengisakwaye uphakamise i-ROI ngokuthengisa ezi zinto zodwa kuhlobo lwakho. IFulfillPanda igxile ekuboneleleni ngerhafu yokuqala yokulahla iinkonzo zelebheli.
Sinceda iinkampani ezilahlayo ukuseka iimveliso zazo ngokuhambisa kuphela, ukufuna iinkonzo zelebheli ezilahlayo eFulfillPanda. Sifuna ukusebenzisa i-branding ukukunceda wakhe ishishini lakho. Izinto zakho zokuwisa zineelebheli zabucala kwaye zenziwe zifumaneke kubathengi bakho phantsi kwegama lophawu lwakho. Ngenxa yoko, sinokukunceda ukuba uphuhlise indlela yakho yokuphawula kunye nokukhulisa ishishini lakho ngokuthe ngcembe.
Iqela lethu lokuSebenzisa iMveliso noPhuhliso linokukunceda ekufumaneni izinto ezifanelekileyo, abavelisi, okanye iifektri. Ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, abasebenzi bethu abathembekileyo baya kuqhuba uvavanyo oluqinileyo lomgangatho. Siza kuyila imveliso yeemveliso kunye neelebhile ezifanelekileyo zabucala ukumela uphawu lwakho. Ukulandelwa kwemveliso kuya kusingathwa liqela lethu lolawulo lomgangatho. Oku kuyakunceda ekuqinisekiseni ukuba zonke izinto ezenziwe zangqinelana kwaye ziyanelisa ukucaciswa kweesampulu zoqobo.
Siza kukhathalela yonke into enxulumene nokulandelwa kwemveliso. Ukuvunywa kwakho, abasebenzi bethu baya kwenza amalungiselelo esampulu yokwenyani, iifoto kunye neevidiyo oza kuzinikwa.
Unga Yakha ipakethe ye-bespoke kunye nelebheli yabucalaIzinto ezilahlayo kunye nokuzaliseka kwepanda. Iingcali zethu ziya kusebenza kunye nawe ukuyila iibhegi kunye nokupakisha okubonisa uphawu lwenkampani yakho. Obu bubuchule obugqwesileyo bokwenza isibheno kunye nokwahlula abathengi bakho.
Sinokukunceda kulawulo lwempahla. Egameni lakho, sikhathalela izinto zakho ezinophawu lwabucala kwindawo yethu ekhuselekileyo simahla. Ngokufanayo, sikunika ifayile yeUkubanakho ukulandela kunye nokulawula uluhlu lwakho ngexesha lokwenyani. Nangona kunjalo, unokuqiniseka ukuba ukuthengisa kwakho kukhuselekile kwindawo yethu.
Ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu kunye nabarhwebi, iFulfillPanda ikwabonelela ngohambiso lwamanye amazwe kunye nokukhetha iindlela ezahlukeneyo zokuhanjiswa. Unokukhetha indlela yokuthumela efanelekileyo ngokufanelekileyo iimfuno zenkampani yakho.
Kutheni uzalisekisa iPanda?
Sibala xa ujonge ukwenza uphawu lwakho kwaye wenze ngokwezifiso ukupakisha kwakho.
Awusoze ube neentloni phambi kwabathengi bakho. Njengokuba yeyethu, yonke into siyiphatha ngononophelo oluphezulu nangobuzaza.
Nxibelelana nathi kwangoko!